अम्फान आँधीका कारण बङ्गलादेश र भारतमा ८४ जनाको मृत्यु - Harekpal
Wednesday, Jun, 03, 2020 २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार
लोकसेवाको अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने
कङ्गोमा इबोला सङ्क्रमित देखिए, चार जनाको मृत्यु
संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसद
राष्ट्रियसभा बैठकः नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग
सुर्खेत, सल्यान र अछाममा थपिए २९ जना कोरोना सङ्क्रमित
छुरा प्रहार गरेर आफ्नै साथीको हत्या गरी फरार तीनजना पक्राउ
नेपालमा फेरि अर्को चक्रवातको प्रभाव पर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना
अम्फान आँधीका कारण बङ्गलादेश र भारतमा ८४ जनाको मृत्यु
हरेकपल सम्वाददाता ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०७:३० मा प्रकाशित
एजेन्सी । भारत र बंलादेशमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण अहिलेसम्म ८४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सन् १९९९ देखि अहिलेसम्मको सवैभन्दा बढी विनाशकारी मानिएको यस आँधीलाई आम्फान नाम दिइएको छ । आँधीका कारण मानवीय क्षतिसँगै घरलगायतका सयौँ भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् भने बालीनाली र रुख बोट विरुवाहरु पनि नष्ट भएका छन् ।
भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकोले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत, पानी, सञ्चारलगायतका सेवाहरु पनि अवरुद्ध भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले एक करोड मानिस आँधीबाट प्रभावित भएको र पाँच लाख मानिसले घर गुमाएको जनाएको छ ।
घटनामा परेकाहरुको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृत्यु भएकाहरुको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने पनि राष्ट्रसंघको अनुमान छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रदेशमा मात्रै ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । ती मध्ये १४ जनाको प्रदेश राजधानी कलकत्तामा मात्रै मृत्यु भएको मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘यति ठूलो र विनाशकारी आँधी मैले अहिलेसम्म देखेकी थिइन ।’ आँधीको प्रभाव परेको बङ्लादेशमा १२ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । मौसम पुर्वानुमान राम्रो भएकाले लाखौ मानिसलाई उद्धार गर्न सफल भएको र मानवीय क्षति कम भएको उनीहरुको भनाई छ ।
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १६:३०
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०८:३०
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०७:३०
कंगोमा फेरी देखियो इबोला, चार जनाको मृत्यु
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०८:३०
भारतमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०७:३०
अमेरिकामा एकैदिन २२ हजारमा कोरोना संक्रमण, १ लाख ३ हजार को मृत्यु
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्धारा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी
आज आइतवार, पञ्चाङ्गसहित हेर्नुहोस् २०७७ ज्येष्ठ १८ गते
आज अष्टमीव्रत, वायुअष्टमी पनि हेर्नुहोस् २०७७ ज्येष्ठ १७ गते
कार्यमा सिद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन
कस्ता व्यक्तिलाई गुणातीत भनिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन